Naya Post Nepal | सुनको भाउ आकाशियो, हेर्नुस् तोलाको कती ?
सुनको भाउ आकाशियो, हेर्नुस् तोलाको कती ?
सुनको भाउ बुधबार प्रतितोला १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। यस दिन सुनको भाउ एकै दिन १ हजार ९०० रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका अनुसार बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९९ हजार ५०० र तेजाबी सुन प्रतितोला ९९ हजार रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ । यस्तै बुधबार चाँदीको भाउ पनि तोलामा ४० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हअजार ३७५ रुपैयाँमा पुगेको छ।
२०७८ फाल्गुन १८, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 164 Views